Burundi: Nolla mampiseho Tilikambo Fiambenana amin’ireo lehilahy nangataka vainafo
MPONINA 1 082 464 150
MPITORY 1 453 694
FAMPIANARANA BAIBOLY 3 688 959
Fitoriana eny ambony môtô
Bénin: Asian’i Désiré fitaovana fandefasana raki-peo ny taxi-môtô ampiasainy, mba hitoriana amin’ny mpandeha
Fitaovam-pitaterana be mpitia ny taxi-môtô any Bénin atsimo. Manana anankiray i Désiré ary mpisava lalana mpanampy izy. Nasiany fitaovana fandefasana raki-peo ny môtô-ny, dia nasiany fanamafisam-peo mitodika any amin’ny mpandeha. Mandefa boky sy gazety noraisim-peo na tantara ara-baiboly foana izy. Vao mitaingina kelikely an’ilay môtô ny mpandeha dia efa manongilan-tsofina. Ary na efa tonga any amin’ny toerana alehany aza izy, dia tsy te hiala fa te hihaino an’ilay izy hatramin’ny farany. Hoy i Désiré: “Tiako aloha raha omeny ny karamako dia mandeha izy mba hahafahako mitondra olon-kafa indray. Fantatro anefa hoe ilay izy mandre ny vaovao tsara no zava-dehibe kokoa noho ny vola. Betsaka koa ny boky sy gazety voapetrako.”
Ankizikely be fikirizana
Ankizivavikely enin-taona i Nolla ary mipetraka any Burundi miaraka amin’ny fianakaviany. Mampiasa fatampera ry zareo rehefa mahandro. Nangataka vainafo ny lehilahy roa, indray andro, mba handrehetana afo. I Nolla no nikopaka afo tamin’izay, satria mbola tsy nianatra izy. Navelany haka vainafo vitsivitsy ry zareo. Hitan’i Nolla izy roa lahy rehefa kelikely satria eo akaiky eo ihany ry zareo no miasa. Hay nandrehetan-dry zareo sigara ilay vainafo. Sosotra be izy ka niteny hoe: “Tsy nomeko vainafo ianareo raha fantatro hoe handrehetanareo sigara ilay izy.” Tadidiny avy eo hoe nisy gazety misy sarina sigara tany amin’ny Efitrano Fanjakana. Lasa àry izy nihazakazaka nankany, ary naka roa tamin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Jona 2014. Nomeny azy roa lahy izany sady nasainy novakina avy hatrany. Hitany indray izy ireo tatỳ aoriana, ary nomeny fanasana hanatrika fivoriamben’ny vondrom-paritra. Tena gaga izy roa lahy nahita ny fikirizan’ilay zaza, ka nanatrika nandritra ny roa andro. Hitan’i Nolla izy ireo tamin’ny fiatoana, dia nasainy niara-nisakafo tamin’ny fianakaviany. Lasa nianatra Baiboly izy roa lahy, satria tena nampiaiky azy ny zavatra hitany sy reny tany amin’ilay fivoriambe.
Fitoriana any am-ponja
Mitory any amin’ny fonja isan-karazany ny anti-panahy any Liberia. Hoy i Yves, mpisava lalana manokana ao Monrovia renivohitra: ‘Nisy gadra telo lasa mpitory tamin’ny Martsa. Enina izao ny gadra efa mpitory ao amin’ny fonjan’i Monrovia.’ Ahoana no ataon’izy ireo rehefa mitory? Hoy i Yves: “Misy fivoriana alohan’ny fanompoana isaky ny alarobia sy asabotsy. Mitory isaky ny efitra figadrana izy ireo avy eo, satria efa nahazo alalana hanao an’izany. Resahiny amin’ny voafonja hafa ny fampanantenana ao amin’ny Baiboly.” Maro izao ny voafonja mianatra Baiboly sy manatrika fivoriana ao am-ponja. Nisy fotoana nanao lahateny tany ny solontenan’ny sampana, ary 79 ny mpanatrika. Misy fandaharana fampianarana Baiboly koa any amin’ny fonja enina hafa, ary efa manao fiovana ireo voafonja.
“Tena mila fanampiana izahay”
Tsy mora ny manampy olona hanatrika Fahatsiarovana raha lavitra be no misy azy. Anisan’ireny ny foko san, na mponina any an’ala, izay mponina voalohany tany amin’ny faritra atsimon’i Afrika. Tso-piaina ry zareo ary mifindrafindra monina. Mihaza sy mioty voankazo no fivelomany. Nandamina Fahatsiarovana tao amin’ny tanàna iray an’io foko io i Glenn, mpisava lalana manokana any Namibia, tamin’ny 2015. Any amin’ny 270 kilaometatra any atsinanan’i Rundu io tanàna io. Io no Fahatsiarovana faharoa natao tany. Nomen’ny manam-pahefana hampiasaina foana ny tranon’ny fitsarana. Nisy 232 ny mpanatrika na dia avy be aza ny orana. Ny teny khwe no ampiasain’ny foko san ao amin’io faritra io, ary manao feo mipoaka kely ry zareo rehefa miteny. Natao tamin’ny teny anglisy ny lahateny ary nadika tamin’ny teny khwe. Tsy misy Baiboly anefa amin’io fiteny io, ka nampiasa sary miloko ny mpandahateny mba hanazavana ny andinin-teny toy ny Isaia 35:5, 6. Manana fampianarana maromaro efa mandroso izao i Glenn. Hoy izy: “Indray mandeha isam-bolana aho no mankatỳ tato anatin’ny roa taona. Mijanona atỳ andro vitsivitsy aho. Ela be ny olona atỳ vao mandroso, satria sarotra be ny fiteniny moa ny toerana koa lavitra. Tena mila fanampiana izahay. Rehefa nandamina Fahatsiarovana aho tamin’ity taona ity, dia nilaza tamiko ny manam-pahefana iray hoe mba tokony hanorina toeram-pivavahana atỳ, hono, isika. Ry zareo ihany, hono, no hanome ny tany sy hanangana an’ilay trano. Mila manome ‘pasitera’ iray fotsiny, hono, isika na mampiofana olona eo an-toerana mba hatao pasitera.”
Namibia: Anabavy roa faly mitory amin’ny vehivavy iray avy amin’ny foko himba